Izindaba ze-HEXAGON 2019 - Geofumadas
NgoJuni, 2019 Geospatial - GIS, GPS / Izinsiza kusebenza, Innovations
I-hexagon yamemezela ubuchwepheshe obusha futhi yaqaphela izinyathelo zabasebenzisi bayo ku-HxGN LIVE 2019, inkomfa yayo yomhlaba wonke yezixazululo zedijithali. Le-conglomerate yezixazululo ezihlanganiswe ku-Hexagon AB, enesimo sokuthakazelisa emishini, isofthiwe kanye nobuchwepheshe obuzimele, yahlela ingqungquthela yezinsuku ezine zobuchwepheshe e-The Venetian eLas Vegas, eNevada, eU.SA. UU HxGN LIVE lapho eqoqa izinkulungwane zama-Hexagon amakhasimende, abalingani nabachwepheshe bezobuchwepheshe emhlabeni jikelele.
Umcimbi uqale ngethulo lobuhlakani Ola Rollén, UMongameli kanye ne-CEO ye-Hexagon, enesihloko esithi "Idatha yakho ingasindisa umhlaba."
"I-Hexagon inombono onamandla wokusebenzisa imininingwane futhi ibuyise emuva isimo sokuncipha kwezinsiza kusebenza kanye nokulahleka kwezinhlelo zomhlaba," kusho uRollén. "Ngokunika amandla ikusasa elizimele, indlela yethu" yokwenza okuhle ukwenza okuhle "izohambisa ukusimama ngokusebenza kahle, ukuphepha, ukukhiqizwa okuthuthukile kanye nokungcola okuncane, imiphumela efanayo yebhizinisi njengamakhasimende ethu sesha ».
Abaholi bezinyunyana zebhizinisi likaHexagon bamemezela imikhiqizo emisha yezobuchwepheshe kanye nezinhlangano zezimboni phakathi kweziphakamiso ezinkulu ngoLwesine ngo-12 ngoJuni. Phakathi komcimbi, Kubanqobi umklomelo lo nyaka, wabonisa umoya emisha, ukubambisana kanye intuthuko kwezobuchwepheshe ngokusebenzisa umthelela amabhizinisi abo, izimboni bona labakhonta kanye nemiphakathi endaweni futhi emhlabeni jikelele.
Kulesi senzakalo bahlonishwa futhi bahlonishwa:
Apex.AI: Ukwandiswa kobuchwepheshe bezimoto ezizimele. Ukuze uzuze izimakethe eziqondile, ezifana nokwakhiwa, ukukhiqiza nokuningi.
I-Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC): Basebenza ukudala uhlelo oluhle lwekhwalithi yokukhiqiza izimoto.
I-Bombardier Aerospace: Amasu omhlangano we-virtual esebenzayo, oqinisekisa izingxenye ngokusebenzisa izindawo ezibucayi zokuthobela
I-Canadian Natural Resources Limited: Imisebenzi yokusekela ethuthukisa ikhwalithi yokuphila kanye nempilo yezomnotho emadolobheni lapho sisebenza khona
I-Censeo: Sebenzisa i-georadar ukudala izindlela zokuhlola ezingenasidingo
Corbins Electric: Yakha futhi wabelane ngemikhuba emihle emisha, hhayi kuphela yenkampani kodwa yonke imboni
Isevisi yamaphoyisa e-CP: Baqinisekisa enye yesitimela esiphephile kakhulu esisebenza kahle eNyakatho Melika.
Frequentis: Yakha izixazululo zokwenza ulwazi lendawo-smart olutholakala kuzo zonke izinhlangano
Fresnillo: Bakha iphothifoliyo yezobuchwepheshe edidiyelwe yokuhlelwa kwemayini, imisebenzi, ibhizinisi, ukuhlola kanye nokuqapha izidingo.
"Amakhasimende ethu angabanikazi bezinguquko futhi abaphoqa abaphindaphindayo, futhi sijabule kakhulu ukugubha abahlonishwayo kulo nyaka ngamagalelo abo asethuthukile," kusho uRollén. "Izindaba zabo ziyasigqugquzela futhi zisishukumisele sonke eHexagon."
I-FTI imemezela ukuqaliswa kwe-FormingSuite 2019 Feature Pack 1
Owenza Technologies (FTI), ehola umkhakha izixazululo design, ukumbumbuluzwa, ukuhlela kanye ebiza ishidi izingxenye zensimbi lonjiniyela, yamemezela ukwethulwa womhlaba wonke FormingSuite 2019 1 Isici Pack. Njengoba iklanyelwe i-izindleko estimators, design onjiniyela, ithuluzi abaklami onjiniyela eziphakeme uhlela yezimoto, Aerospace, ama-product ezabathengi kanye electronics, lesi sici iphakethe has ngcono eziningi ikhwalithi engcono yemiphumela kanye nokusebenza sabo bonke abasebenzisi.
Izinguquko ezijwayelekile emisebenzini yamabhange kanye nezinqubo ze-software zivumela ukuthi imibono yokusetshenziswa kwezinto (MUL) ne-Design for Manufacturing (DFM) igcwaliseke ngokugcwele. Lezi imiqondo ukusiza amakhasimende ukunciphisa imfucuza impahla ngokusebenzisa ukuhlolwa virtual esikhundleni ukuhlolwa lwezimpawu kanye formability ukuxazulula izinkinga ezingase zisongele ubuqotho isiqeshana eside ngaphambi ucezu ifinyelela phansi. Izinqubo ezintsha ze ukuvala esofthiwe avumela amaqembu ukuba ahlale esidlekeni futhi adale ngokushesha, futhi alahlekelwe kakhulu kunanini ngaphambili, lapho ecubungula izici eziningi ohlelweni lokugcizelela. Izinguquko emigodini yomshayeli kanye nezici zesithasiselo zihlanganisa izixazululo zangempela zomhlaba ngenqubo yedijithali, okuvumela izingqinamba ezinkulu nokusebenza kahle.
Ngalolu hlobo lwakamuva, i-ProcessPlanner module ye-FormingSuite iyaqhubeka nokwengeza ukwesekwa kwezinqubo ezikhethekile kunazo zonke ekwenzeni ishidi lensimbi. Umsebenzi wokusebenza I-Line Die Plan manje ivumela abasebenzisi ukuthi babone imininingwane yokukhipha inqubo emisebenzini eminingi (kokubili ku-intanethi nokungaxhunyiwe ku-intanethi). Lo mkhono omusha uthuthukisa incazelo ebonakalayo yenqubo yokunciphisa, kanye nomthwalo we-matrix, izindleko zamatriki, ubukhulu be-matrix nezibalo zesisindo se-matrix. Izinketho ezintsha zokubala izindleko zekham zandisa ukuguquguquka, zinikeze izilinganiso ezinembile zamakhompiyutha okwenziwe ngendlela efanele, kanye nesilinganiso samatrices okuqhubekayo namatrices emigqa. Ukuphequlula izinguquko kuletafula lomsebenzi, inketho entsha yokubonisa kwi-ProgDie Process summary screen ibonisa ubukhulu befa kanye nokuhlelwa kwenqubo.
I-module ye-COSTOPTIMIZER manje ibonisa ukuthuthukiswa okukhulu okukhulu ngejubane lokuxazulula izinyathelo, kanye nezinketho ezimbili zokuboniswa ezintsha zokubonisa isimo somthengisi kanye ne-3D ngokuhambisana nomklamo. Ukusetshenziselwa kwezindleko zemiklamo yokudoba manje kuvumela abasebenzisi ukuthi bakhethe ukuthi ucezu lwenziwe yini ngenkathi kugcinwa isinxephezelo somsebenzi, noma uma isithasiselo sinqunywe ngaphandle kokuthinta ingxenye. Lolu shintsho, lunikeza abasebenzisi ngamathuluzi adingekayo ukuhlola ngokuphumelelayo amathuba okulondoloza izindleko zempahla ezincekeni ezakhiwe nesithasiselo. Ukwandisa amakhono ayingqayizivele we-FormingSuite ukwethula nokuhlola i-geometry yenethiwekhi nokusekela; Ithuluzi lomgodi wokushayela okwamanje linikeza ukhetho lokungeza izinto ezungeze izimbobo zokushayela, njengoba kuvame kakhulu kumiklamo yomhlaba wangempela. Lokhu kuvumela onjiniyela ukuba baqiniseke ubuqotho bemiklamo yabo ye-strip ku-software nakwe-workshop.
Okokugcina, kwenziwa izibuyekezo ezibalulekile ukuze ziqede Ngokusheshayo. Ukulungiswa okuzenzekelayo kwesikhumba ngesikhathi sokuqothula kuqinisekisa ukuthi imiphumela yokuqeda imisebenzi inembile. Ukunquma okuzenzakalelayo manje kunika izixazululo ezisheshayo nemiphumela enembile kakhulu.
"Sijabule kakhulu ukumemezela ukukhishwa kwethu kwakamuva eHxGN LIVE 2019, kugxilwe kulo nyaka ekuzinzisweni okusekwe kwedatha," kusho uMichael Gallagher, oyi-CEO kanye noMongameli we-FTI. "Enye yemigomo ephambili yesoftware yethu ukwandisa ukusetshenziswa kwezinto, ezingagcini ngokusindisa amakhasimende ethu izigidi zamadola, kodwa futhi isebenzisa idatha ukunciphisa imfucuza nokwenza inqubo yokubekwa uphawu ihlale isebenza njalo."
I-FormingSuite 2019 Isici sePakethe ye-1 manje itholakale kumakhasimende avela kuwebhusayithi ye-FTI forming.com.
I-Aspen Technology ne-Hexagon Memezela Ukusebenzisana Okusha Ukusheshisa Ukuguqulwa Kwamadijithi ku-Process Industries
Izinkampani zingakwazi ukusheshisa ushintsho oluvela kumadokhumenti-olusekelwe kuma-workflows we-digital, ukuthuthukisa kokubili umkhiqizo kanye nekhwalithi yemiphumela kuyo yonke umjikelezo wokuphila.
Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN), inkampani isofthiwe kwempahla nokwenza kahle, futhi Hexagon yamemezela ileveli entsha ngokubambisana esekelwe Memorandum of Understanding (MOU) eduze ngaphezulu qondanisa izixazululo abiza ukulinganisa, ubunjiniyela eyisisekelo kanye nomqondo we-AspenTech nge-suite ye-engineering yeHexagon PPM, ukuvumela ukuhamba komsebenzi okugcwele idatha yedatha yonke imjikelezo yempilo yezimpahla.
AspenTech futhi Hexagon PPM hlanganani njengoba kuqala ukumaketha inqubo design engineering digital ngokugcwele kokuhlaziywa kwezomnotho okuhlangene ukusiza amakhasimende ukuphatha kangcono izingozi zezimali kwamaphrojekthi eziyinkimbinkimbi, okuyinto kuyinselele enkulu namuhla. Amakhono kuhlanganiswe Ingasheshisa ukuguqulwa digital bese unika amandla ukuqaliswa izixazululo umhlabeleli ihlanganiswe ezimbili abahlinzeki isofthiwe ehamba phambili.
Ngekusebentisana, AspenTech futhi Hexagon PPM anganikeza egcwele kakhulu twin digital, kuhlanganise kokubili ingqalasizinda isitshalo futhi yezinqubo zamakhemikhali ezenzeka ngaphakathi ukuthi ingqalasizinda ngokomzimba, ukuvumela opharetha ukwenza izinqumo ezingcono ukuthi ukukhulisa ukusebenza, ikhwalithi nesikhathi somsebenzi. ukuhlela Software, izinhlelo kanye ukuthembeka AspenTech, kanye isipiliyoni Hexagon PPM for esigabeni enemininingwane ubunjiniyela ekuklanyweni kwezakhiwo kanye izitshalo, kuzosiza opharetha ukuze kalula uthephe onobuhle ubunjiniyela phakathi nokuhlinzwa, ukukhulisa babuyele ekutshaleni kwabo futhi bavumele ukuba baphendule kangcono ezimweni zemakethe.
Lesi simemezelo sifike ngesikhathi senkulumo yokuvula yeSihlalo we-Hexagon PPM, uMattias Stenberg, ku HxGN LIVE I-2019 eLas Vegas, ingqungquthela ye-digital yesikhulumi se-Hexagon yonyaka, lapho u-Antonio Pietri, umongameli kanye nomphathi we-Aspen Technology bejoyina khona.
UPietri uthe: “Lokhu kusebenzisana kuzovumela abathengi ukuthi bakwazi ukuzibandakanya ekukhetheni izisombululo ezivela kubahlinzeki abahola phambili emakethe kuyo yonke imijikelezo yempilo, kusukela esigabeni sokuklama kuya ezinhlelweni ezisebenza futhi zigcina isitshalo. "Amafemu wezobunjiniyela, okuthengwa kwezokwakha kanye nokwakha (EPC) nabasizi abazokwazi ukusheshisa izinguquko zabo zedijithali ngokuzethemba okuphelele, besekelwa yizixazululo ezinhle kakhulu ekilasini labo."
UStenberg uthe: "Ngokuya kokuhlola nokuzibophezela kwethu namakhasimende ahlanganyelwe, siyaqiniseka ukuthi kungenzeka ukuthi kube nomthelela ekusebenzeni nasekusebenzeni kahle kwamaphrojekthi. Ukuvumelanisa izindleko zephrojekthi nezinqumo ekuqaleni kwenqubo yokwakha kunciphisa isabelomali kanye nobungozi bohlelo. "Ngemuva kwephrojekthi, inhlanganisela yokulungiswa kokuqagela kanye nezilawuli ezithuthukile nezixazululo zethu zokulawulwa kwemininingwane zihumusha zibe yizitshalo ezisezingeni eliphakeme ezizosebenza kangcono empilweni yabo yonke."
Amakhasimende kakade asekela lesi sinyathelo esisha:
"U-Eni ubheke phambili ezinhlelweni ezinjengaleyo ephakathi kweHexagon PPM ne-AspenTech," kusho u-Arturo Bellezza, umphathi wezobunjiniyela kwa-Eni. «Ukuhlanganiswa okuqondile okuholela phakathi kokulingiswa kwezinqubo, imodeli ye-3D nokusebenza kuzovumela ukuqhubekela phambili okukhulu kuhambo lwedijithali lomkhakha wethu».
I-hexagon ivula iphothifoliyo ye-OnCall i-HCGN ukuze ivuselele ukuqapha nokuphendula komphakathi
I-hexagon iqalisiwe I-HxGN OnCall, iphothifoliyo yokuphepha yomphakathi ephelele futhi yesikhashana esisebenziseka ukuhlaziywa kwedatha yesikhathi sangempela ukuthuthukisa ukuqwashisa kokusebenza, ukwandisa ukusebenza kahle nokwenza ngcono izinsiza.
OnCall HxGN iphothifoliyo yakhiwa amasethi ezine imikhiqizo kungenziwa efakwe ndawonye noma ngokuzimela: IHhovisi, Ukuhlaziya, futhi wokuHlela Response Records. Ngokubili, iphothifoliyo inikeza umthombo ohlukile weqiniso ukuze ukwazi ukusabela ngokushesha futhi uqinisekise amadolobha aphephile. HxGN OnCall uwukuphela iphothifoliyo ephelele ukuphepha komphakathi wadala nesizinda Ubuchwepheshe kuwo wonke amazinga abezimo eziphuthumayo esikalini nokusebenza: amaphoyisa, umlilo, EMS, ukuvikelwa civil, abaqhubi ingqalasizinda ezinkulu, umngcele namasiko, usizo komgwaqo nokuningi
"U-Hexagon ubumba ikusasa lokuphepha komphakathi ngokuvumela izinhlaka ukuthi zikwazi ukusebenza futhi ziphendule," kusho yena. Ola Rollén, UMongameli kanye ne-CEO ye-Hexagon. "I-HxGN OnCall isebenzisa le datha ukuthi ihlinzeke ukuxhumana, ukusebenzisana nobuhlakani emadolobheni aphephile futhi anamandla."
Ikhono layo lokuqaliswa kulezi zakhiwo nakwefu, ivumela ama-ejensi azo zonke izinhlobo ukuba abe nezenzakalo ezingcono, athuthukise imiphumela futhi anciphise izingozi ngokuqhubekayo. Ukwakhiwa cishe emashumini amathathu eminyaka yezimboni eziholela ekuhlangenwe nakho, i-HxGN OnCall ihlanganisa i-IoT, ukuhamba, i-analytics kanye nefu ukuletha isizukulwane esilandelayo izixazululo zokuphepha zomphakathi kuma-ejensi emhlabeni jikelele. Amakhono ayo asekela idatha engenayo ngaphandle kwamakholi wefoni, kufaka phakathi i-SMS, imibiko esheshayo nevidiyo, ukuqinisekisa ukuthi izakhamizi zifinyelela eziphathimandla zendawo ukunikeza ulwazi oluzogcina izimpilo zabo kuzo zonke iziteshi zokuxhumana ezikhona.
Ukuhlukaniswa kwe-geospatial yeHexagon kuqala uLuciad V2019
I-Hexagon Geospatial Division iqalise uLuciad V2019 ku-HxGN LIVE 2019, ingqungquthela yezixazululo ze-Hexagon digital.
Njengoba i-portfolio yayo i-Luciad, i-Hexagon inikeza amapulatifomu e-state-of-the-art yokwazi isimo nesimo esihlakaniphile ngesikhathi sangempela. Ukuqaliswa kukaLuciad ku-2019 kuhloswe ukudiliza ama-silos wedatha, ukusiza izinhlangano, amadolobha namazwe ukuqonda kangcono ukuxhuma okuqhuba izwe lanamuhla futhi kuthinte izinguquko ezenzeka kuzo.
"ILuciad V2019 izovumela izinhlangano ezihlakaniphile, amasayithi, amadolobha nezizwe, zisebenzise ithuba lokuxazulula izixazululo ezinjengendawo enobuhlakani, futhi zidale ukuxhumana okudingakalayo ukushayela izinqumo zesikhathi sangempela," kusho uMladen Stojic, uMongameli weGeospatial Division kusuka eHexagon. "Ipulatifomu enjengale, ekuphambaneni kwezidingo zezwe, ukusebenza nokubonwa, ibalulekile ezinhlanganweni zomhlaba wonke ezilawula ukugcwala kwedatha ye-sensor ye-IoT, okumele ibonwe ukuze kuboniswe impumelelo ekusebenzeni nasekusebenzeni. ukuthunywa ».
Ngokusekelwa ngokuqondile kweJavaFX, isiteji esivele sivuselelwe seLuciadLightspeed, ivumela ukudala ukuxhumana okusebenzayo komsebenzisi, ngenkathi usebenzisa inzuzo ephelele ye-GPU. Zombili LuciadLightspeed neLuciadFusion ziyahambisana ne-OpenJDK, kanye nemishini yangempela ye-Oracle Java. Abasebenzisi bangathuthukisa amasevisi wedatha azenzekelayo nge-flexible API ye-RESTful ku-platform ye-LuciadFusion yeseva noma ithuthukise i-LuciadFusion Studio eyakhelwe ukuphathwa kwedatha elula futhi ehlangene.
Inguqulo Luciad V2019 inikeza izici Ukuvuselela zeselula iziphequluli kokubili LuciadMobile ukuze LuciadRIA ukuthi kukhona iyahambisana izidingo zakamuva ukuzivikela kanye zezindiza, kusukela isosha wehla ukuba ukuhlela wezasemoyeni efwini, futhi amazinga entsha ye , njenge-MS2525, i-MGCP ne-AIXM. Lokhu kwenza uLuciad yiyona kuphela iphothifoliyo yomkhiqizo embonini enikeza ukusekelwa okungokomfanekiso okuhambisanayo kwayo yonke imikhiqizo yayo.
Ukuqaliswa kuzofaka futhi umkhiqizo omusha obizwa nge-LuciadCPillar, okuyinto impendulo yeHexagon ekudleni okukhulayo kwedeskithophu ephoqelela i-desktop API yomphakathi we-C ++ / C #.
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana noLuciad V2019, vakashela https://www.hexagongeospatial.com/products/luciad-portfolio
Ukuhlukaniswa kwe-geospatial ye-Hexagon kunikeza i-M.App Enterprise 2019
I-Geospatial Division yeHexagon, iqalise i-M.App Enterprise 2019 ku-HxGN LIVE 2019, ingqungquthela yezixazululo zedijithali yeHexagon. Le nguqulo yakamuva ye-M.App Enterprise, ihlanganisa amandla we-Hexagon's Luciad Portfolio ukuthuthukisa ukuboniswa, ukuhlaziywa kanye nokuphathwa kwedatha.
Ideal for ukuqapha izimpahla, hlola izinguquko futhi uthathe isinyathelo platform M.App Enterprise yisisombululo yangasese eyenza izinhlangano phaka Smart Hexagon M.Apps elazisa izinkinga zabo zebhizinisi ngamandla kususelwa indawo. Izici ezintsha M.App Enterprise 2019 kubeke isisekelo sokuba abasebenzisi ukuzwa smart digital ngokoqobo 5D, lapho idatha axhunyiwe ngokushelela ngokusebenzisa convergence emhlabeni wangempela ne digital kanye intelligence luhlanganiswe nato tonkhe izinqubo .
"I -AppApp Enterprise ethuthukisiwe manje isebenza nobuchwepheshe bethu beLuciad, obuvumela abasebenzisi ukuthi babe nokuhamba phambili emhlabeni womabili, uma kukhulunywa ngokubuka idatha kanye nokuhlaziywa kwedatha ukuxhumana ngolwazi ngaphandle kwamandla nangesikhathi sangempela," kusho uGeorg. Hammerer Umqondisi Wezobuchwepheshe - Izicelo zesigaba se-Hexagon geospatial division. "Le nhlangano yebhizinisi elihlanganisiwe manje ivumela abasebenzisi kanye nabalingani ukuthi bakhe izixazululo eziqonde ngqo ezimakethe zabo nasezigabeni zezimboni."
Ukuhlanganiswa kwe-Luciad Portfolio kuzovumela abasebenzisi ukuba baxhumane, babone ngeso lengqondo futhi bahlole idatha ye-vector kanye ne-rasterized kusuka ku-Smart M.Apps yabo ku-3D. Manje futhi iveza izici zendawo ngendlela engokoqobo, ngokusekelwe kwedatha yokuphakama yendawo. Ukumboza izindawo ezinkulu zendawo ngokuxazululwa okuphezulu, i-M.App Enterprise 2019 ivumela abasebenzisi ukuba baxhumane nemikhawulo yokuphakama kwama-mosaic enikezwa yi-LuciadFusion. Ngaphezu kwalokho, ukufakwa kokuhlelwa kwemigomo ku-interface ye-Spatial Workshop yomsebenzisi kuvumela i-M.App Enterprise ukuba ikwazi ukutholakala okude okude nokufunda komshini -Ukufunda kweMachine.
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana ne-M.App Enterprise, vakashela https://www.hexagongeospatial.com/products/smart-mapp/mappenterprise.
I-hexagon inikeza isisombululo sokuthola ukukhathala nokuphazamiseka kwabasebenzisa imoto elula
I-hexagon AB, ethulwe I-HxGN MineProtect Operator Alertness System Vehicle Light (OAS-LV), ukukhathala nokuphazamiseka kweyunithi, okulawula ngokuqhubekayo ukuphazamiseka komuntu osebenza ngaphakathi ngaphakathi kwekhamera yezimoto ezikhanyayo, amabhasi kanye namathayela amancane.
Oaş-LV Hexagon wenabisa iphothifoliyo izixazululo ezokuphepha opharetha, ukugcwalisa igebe ukuvikela opharetha izimoto ukukhanya, gwema ngilale at kwesondo, nqwamana noma unezinye ahlobene ukukhathala noma ukuphazamiseka izigameko. Umkhiqizo usekelwe ebuchwepheshe obusetshenziswe ku- I-HxGN MineProtect Operator Alertness System Vehicle Esindayo (OAS-HV) -Isistimu Yesixwayiso Sezithuthi Ezisindayo, okuvikela abashayeli bamaloli abashisayo.
"Ukukhathala kwe-opharetha nokuthikamezeka kuyingozi ephindaphindiwe ezenzakalweni ezifana nezokumbiwa kanye nezinye izimboni," kusho u-Ola Rollén, umongameli kanye ne-CEO ye-Hexagon. "I-OAS-LV iyisengezo esibalulekile kuphothifoliyo yethu yezokuphepha emayini ehamba phambili iM mineProtect kanye nobunye ubufakazi bokuthi iHexagon, njengamakhasimende ayo, ithatha ezokuphepha ngokungathi sína."
Idivaysi elula yokufaka ku-cab ikhipha ubuso bomqhubi ukuze ithole noma yiziphi izimpawu zokukhathala noma ukuphazanyiswa, njenge-microsleep. I-algorithm yokufunda okuzenzakalelayo -ukufunda imishini, basebenzisa inzuzo yalezi zimpawu zokuhlaziya izici zobuso ukuze banqume ukuthi isaziso kufanele senziwe noma cha. I-OAS-LV isebenza ezimweni ezikhanyayo nezimnyama, nangama-lens okuphothuliwe kanye / noma izibuko zelanga.
I-hardware ku-cab ihlale ixhunyiwe, futhi idatha yemoto ingadluliselwa efwini noma esikhungweni esithile sokuqapha. Lokhu kuvumela ukuthola izaziso ngesikhathi sangempela, ukuze abaphathi nabaphathi bangasebenzisa i-protocol yokungenela futhi bavumele ukuhlaziywa kwe-forensic eyengeziwe. I-OAS-LV ingenye yezixazululo eziningi ezintsha ezethulwa kuleli sonto I-HxGN LIVE 2019, Inkomfa yedijithali yobuchwepheshe bedijithali yonyaka we-digital.
I-hexagon iguqula ukutholakala kwezinsizakalo zangaphansi komhlaba ngesisombululo esisha se-radar sokungena emhlabathini
I-hexagon AB yanikeza i-Leica DSX, isisombululo esithatha isisindo se-radar (GPR) esibonakalayo esitholakala emhlabathini, ukutholakala kwezinsiza zomphakathi ezingaphansi komhlaba. Iklanyelwe ukwenza kube lula ukuthuthwa kwedatha nokuzenzakalela ukucubungula kwedatha, i-DSX ivumela abasebenzisi ukuba babone kalula, ibalazwe futhi babone ngeso lengqondo amasevisi angaphansi komhlaba ngokuphepha futhi ngokuthembekile ngokucacile kokubeka kahle.
"Sihlelele i-Leica DSX yabasebenzisi abanolwazi olunqunyelwe lwe-GPR abadinga ukuthola, ukugwema noma ukubalungiselela ngemisebenzi yomphakathi engaphansi komhlaba ngendlela elula, esheshayo nethembekile," kusho u-Ola Rollén, umongameli kanye ne-CEO ye-Hexagon. "Ngalesi sixazululo sokuthola usizo, i-Hexagon iletha ubuchwepheshe be-GPR kuzingxenye ezintsha zomsebenzisi ukuvumela ukusebenza okuphephile kunoma yimuphi umsebenzi odinga ukumbiwa."
Isici esichaza i-DSX yisofthiwe yayo, i-DXplore, ehumusha izibonakaliso ezihlangene zibe imiphumela enembile futhi elula yokusebenzisa. Ngokungafani nezinye izixazululo ze-GPR, abasebenzisi akudingeki babe nokuhlangenwe nakho ekuhumusheni idatha eluhlaza ye-radar nama-hyperbolas. I-DXplore isebenzisa i-algorithm ehlakaniphile yokwenza amamephu wezinsiza ze-digital ngemizuzu, ibonisa imiphumela etholakalayo ngenkathi abasebenzisi besesensimini. Ibalazwe lingabuye lithunyelwe kuLeica DX Manager Mapping, Leica ConX noma enye isofthiwe yokuthunyelwa kokuthunyelwa kwemishini kamuva, noma ukugqamisa idatha eyengeziwe.
I-hexagon yandisa uchungechunge lweLeica BLK, ivuselela ukuthunjwa kweqiniso kwengqalasizinda, izinhlelo zokuphepha nokuhamba
I-hexagon AB ithumele izithasiselo ezimbili ezintsha kumchungechunge weLeica BLK. I I-Leica BLK2GO kuyinto encane futhi ehlanganiswe ngokuphelele ephathekayo porting scanner embonini, kanye Leica BLK247 i-3D yokuqala yesisindo sokuskena i-laser yokubhekwa kokuphepha okunikeza ukunakekelwa okuqhubekayo kumahora we-24 wosuku, izinsuku ezingu-7 zesonto.
"Ukunwetshwa kochungechunge lwe-BLK kuyaqhubeka iminyaka ye-Hexagon ye-20 igxile kakhulu ekuguquleni ukuthathwa kwangempela," kusho u-Ola Rollén, umongameli kanye ne-CEO ye-Hexagon. “Lezi zinzwa aziqali ngokwazi amakhono azo kwezobuchwepheshe, kodwa futhi nangokusebenziseka kwazo. I-Leica BLK2GO ingathathwa nomaphi, futhi i-Leica BLK247 ayilali neze «.
I-Leica BLK2GO inikeza ukuhamba okungakaze kubonwe ukuskena izimo zangaphakathi eziyinkimbinkimbi. Isithwebuli se-laser esilondoloziwe sihlanganisa ukuboniswa, i-LiDAR kanye ne-edge computing ubuchwepheshe ukuskena ku-3D ngenkathi kusendaweni, kuvumela abasebenzisi ukuba babe besheshayo futhi baphumelele ekuthatheni izinto nezindawo. I-BLK2GO inezinhlobonhlobo zezicelo, kusukela ekusetshenzisweni okusetshenziselwa ukuphinda kusetshenziswe embonini yezakhiwo nokuklanywa, ukuhlola indawo, ukuhlola kuqala kanye ne-VFX yokusebenza kwama-media nokuzijabulisa.
I-Leica BLK247 iklanyelwe ukuthunjwa okuqhubekayo ku-3D, ukwandisa amandla okufaka izicelo zokuphepha. Inzwa ihlinzeka ngokuqwashisa ngesimo ngesikhathi sangempela, ngokusebenzisa ikhomitha ye-perimeter kanye nobuchwepheshe bokubona ukutholakala okunikwe amandla yi-LiDAR. Ngokusebenzisa i-intelligence yokufakelwa, i-BLK247 ingahlukanisa phakathi kwezinto ezihleliwe nezihambayo, njengokuthi umuntu uhamba futhi ushiye i-suitcase, futhi abone izinsongo zokuphepha ukuze ahlinzeke izaziso ngesikhathi sangempela, izinguquko ezilindelwe nezingalindelekile. I-BLK247 ithuthukisa kakhulu ulwazi ngalesi simo ngaphakathi kwezikhala ezivinjiwe noma ukuphepha okuphezulu, ukususa isidingo sokuba abantu bahlale beqapha izindonga zezikrini zokuphepha noma amapaneli okulawula okwakhiwa okuhlakaniphile.
Ukuhlukaniswa kwe-hexagon ye-geospatial kunezela M.App Enterprise no-M.App X ohlelweni lokufundisa
I-Hexagon Geospatial Division izokwenza i-M.App Enterprise kanye ne-M.App X izixazululo ezitholakalayo ngokusebenzisa uhlelo lwazo lwezemfundo jikelele kusukela ngo-11 Juni ka-2019. Lokhu kuhlanganisa kuzonikeza abafundi ithuba lokuthola intuthuko engcono nokusetshenziswa kwezicelo ze-geospatial, okuzobanika inzuzo yobuchwepheshe emakethe emisebenzi yokuncintisana.
"Njengoba imboni yezolimo ifinyelela kwizicelo zamabhizinisi ezinamafu, sidinga ukuhlomisa amanyuvesi ngamathuluzi afanele ukulungiselela abafundi ikusasa," kusho uMike Lane, Umphathi Wezemfundo weGlobal Hexagon Geospatial Division ".
M.App Enterprise futhi i-M.App X ivumela amanyuvesi ukuthi asebenzise ubuchwepheshe bebhizinisi likaHexagon ukufundisa abafundi ukuthi bangayisebenzisa kanjani idatha ye-geospatial futhi baxazulule izinkinga zomhlaba wangempela ». I-M.App Enterprise iyisiteji sendawo sokugcina nokuthumela i-Hexagon Smart M.Apps: izinhlelo zokusebenza ezihle ezihlanganisa okuqukethwe, ukuqhutshwa kwebhizinisi nokukhishwa kwe-geoprocessing ngokubuka kokuhlaziya okunamandla..
M.App X yisisombululo sokuxhaphaza se-geospatial esisekelwe efwini, eklanyelwe ukwakha imikhiqizo nemibiko etholakala ezithombeni, iboniswe kwipulatifomu lebhizinisi.
"Ngokwakha izinhlelo zokwenza izinto eMSApp Enterprise, abafundi bangafunda ukuthi bahlanganisa kanjani izinhlobo ezahlukahlukene zedatha esekwe yendawo nokusebenzisa amandla wokuhlaziya ngesikhathi sangempela," kusho uLane. “Ngokusebenzisa i-M.App X, abafundi abafuna imisebenzi kubuhlakani be-geospatial intelligence (GEOINT) kanye nemikhakha ehlobene nabo bazofunda amakhono okuqwashisa ngendawo futhi bathole ulwazi oludingekayo ukudala, ukuphatha nokunikeza imininingwane evumela ukuhlanganiswa, ukuhlaziywa kanye nokuhlanganiswa imininingwane yezwe. . Sijabule kakhulu ukunikela ngamapulatifomu emphakathini wezemfundo «.
Uhlelo lwezemfundo luzohlinzeka abafundisi nabafundi ngenani elikhulayo lamasampula ekuqeqesheni kwabo, izibonelo, amavidiyo nokunye, ukusebenzisa ngenkathi befunda futhi basebenze noMa .App Enterprise noM.App X.
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nokufaka i-M.App Enterprise no-M.App X ekolishi ye-geospatial kanye ne-intelligence indawo yeyunivesithi, vakashela https://go.hexagongeospatial.com/contact-education-programs.
Thumela Previous«Langaphambilini I-LandViewer - Ukuthola ukushintsha manje kusebenza kusiphequluli
Post Next #BIM - Course Specialisation in Structural Engineering nge-ETABSOkulandelayo »